Wasiirka Amniga Somalia oo war kasoo saaray xaaladda kacsan ee Muqdisho hadda Warbaahinta la Hadlay. |
Wasiirka Amniga Somalia oo war kasoo saaray xaaladda kacsan ee Muqdisho hadda Warbaahinta la Hadlay.
Muqdisho(GNN):-Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo shir jaraa’id goordhaw ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan Muqdisho, isagoo dardaaran u jeediyey dadka ku nool magaaladan.
Wasiirka ayaa been abuur ku tilmaamay in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen guriga madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud.
“Madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud, tan iyo markii uu xilka wareejiyey 2017-kii waxaa waardiyeynayey ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada Qaranka, maamuus iyo mudnaan ayuu leeyahay, suurta galna maaha in la weeraray oo wax ka jira malahan,” ayuu yiri.
Wasiir Xundubey ayaa sheegay in dad aan u naxeyn dadka reer Muqdisho ay magaalada soo geliyeen maleeshiyaad, kuwaas oo uu sheegay in ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dagallada laga abuurayo Muqdisho ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye, sida uu sheegay.
“Reer Muqdisho waxaa idin lee yahay dagaaladaan lagu soo xawilay Muqdisho haka qeyb qaadanina, dowlado shisheeye ayaa loogu daneynayaa, dad yar oo Soomaali ah ayaana dalaal ka ah, dagaal waad soo aragteen ee ayaanaa iska burburin nabadda noo soo iftiintay,” ayuu yiri Wasiirka amniga Xasan Xundubey.